Jawaab celinta xirmada gargaarka Dalxiiska Hindiya si deg deg ah oo xanaaqsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Jawaab celinta xirmada gargaarka Dalxiiska Hindiya si deg deg ah oo xanaaqsan
Wararka Ururada • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dr. Subhash Goyal, Madaxweynaha Isutagga Xirfadleyda Dalxiiska ee Hindiya, oo ku saabsan xirmada gargaarka dalxiiska Hindiya.
Falcelin isku dhafan ayaa ka jirta ganacsiga safarka ee ku saabsan tallaabooyinka yareynta dalxiiska Hindiya ee uu ku dhawaaqay Wasiirka Maaliyaddu inuu soo nooleeyo dalxiiska. Dareenka guud ayaa ah inay aad u yar tahay, goor dambe, in kasta oo ay aqoonsan tahay in wershaduhu aysan gebi ahaanba agoon ahayn.
Wasiirka Maaliyadda ee Midowga, Smt Nirmala Sitharaman, ayaa ku dhawaaqay xirmada gargaarka dalxiiska Hindiya oo keliya shalay, Juun 28, 2021.
Xidhmada ayaa loogu talagalay inay wax ka qabato baahiyaha daneeyayaasha socdaalka iyo dalxiiska iyada oo ay ugu wacan tahay COVID-19.
Natiijada la filayo waa in la kobciyo dhaqaalaha Hindiya ee la-dagaallanka tirada badan ee dhibaatooyinka uu keeno coronavirus.
Dr. Subhash Goyal, Madaxweynaha Isutagga Xirfadleyda Dalxiiska ee Hindiya, oo madax ka ah STIC Group, wuxuu sidaa ka yiri ku dhawaaqista Wasiirka Maaliyadda ee Dalxiiska.
“Ogeysiiskan waa mid soo daahay oo aad u yar. Durba 10 milyan oo qof ayaa shaqo la’aan noqday, kumanaan shirkadoodna waxay noqdeen musalaf.
“Iyadoo aan la shaacin taariikhda la soo saarayo fiisooyinka elektaroonigga ah iyo taariikhda aan bilaabeyno duulimaadyada caalamiga ah ee la qorsheeyay, dib uma soo nooleyn karno dalxiiska, fiisooyinka bilaashka ahina waxay noqonayaan kuwo aan macno lahayn. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan dalxiisayaasha qarashka ku baxa qiimaha duulimaadku waxay si fudud u bixin karaan khidmadda fiisaha. Tani waxay ka faa'iideysan doontaa oo keliya dalxiisayaasha dhulka ka imanaya ee Myanmar, Bangladesh, iyo Pakistan. Lacagta ku keydisan adigoon siinin fiisooyinka dalxiis ee bilaashka ah waxaa loo isticmaali karaa siinta deeqaha hagaha dalxiiska iyo shaqaalaha dalxiiska.
Bixinta amaahda hagaha dalxiisyaasha iyo shirkadaha dalxiiska yar yar ayaa sidoo kale ah mid aan macno lahayn, maxaa yeelay sidee ayey u soo celinayaan amaahda oo ay ku bixin doonaan dulsaarka marka ganacsi jirin? Haddii dowladdu runti rabto inay caawiso, markaa waxaa jira oo keliya 11,000-12,000 hagayaal dowladdu aqoonsan tahay, dowladduna si fudud ayey hal mar u siin kartaa deeq hal mar ah isla qodobka sida ay u siinayaan beeraleyda iyo raashin siinta dadka geedaha saboolka ka hooseeya. . Isla qodobadaas, deeqo ayaa la siin karaa hagayaasha dalxiiska, hawlwadeenada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, milkiilayaasha basaska / taksiilayaasha iyo darawalada, iwm. Tani waxay ka caawin doontaa inay sii noolaadaan ilaa iyo inta xuduudaheenna la furayo, oo dalxiisayaashu bilaabayaan inay yimaadaan Hindiya.
12 Sheeko Surfside Condo ah oo ku yaal Collins Ave ee ...
Viking wuxuu soo dhaweynayaa dadka Mareykanka ee ku soo laabtay Yurub